Naya Post Nepal | बढ्यो सुनको मुल्य, आज कती छ तोलाको ?
बढ्यो सुनको मुल्य, आज कती छ तोलाको ?
शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसैगरी तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ । लगातार तीन दिन सुनको भाउमा गिरावट भएपछि शुक्रबार उकालो लागेको हो ।
यो साता सुन तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको छ । गत शुक्रबार सुन प्रतितोला ९३ हजार १०० रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा भने सुनको भाउमा सामान्य उतारचढाव देखिएको थियो । यस साताको मंगलबार सबैभन्दा उच्च मूल्य सुन प्रतितोला ९३ हजार २०० रुपैयाँ तोकिएको थियो । बिहीबार भने सुन सबैभन्दा कम मूल्य प्रतितोला ९२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन चाँदीको भाउ बढेको छ । यस दिन चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले उकालो लागेर एक हजार २६० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन भने चाँदीको भाउमा १५ रुपैयाँले नै गिरावट भएर प्रतितोला एक हजार २४५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
साताभरमा चाँदीको भाउमा कुनै घटबढ भएको छैन । अघिल्लो साताको शुक्रबार पनि चाँदीको आजकै भाउमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार लगायत अन्य चार कारोबार दिन पनि चाँदी प्रतितोला एक हजार २६० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । यो साताको बिहीबार चाँदी सबैभन्दा कम मूल्यमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
थप समाचार – दा’हसंस्कार गरेको छ वर्षपछि आमा साउदी को जेलमा जिउँदै भेटिँदा नवलपरा सीको सुनवलकी सुशी ला मगरका मनमा उब्जे को पहिलो प्रश्न थियो “मेरी आमा को नाममा साउदीबाट आएको त्यो ला’स कसको थियो ? bत्यसपछि सुशीलालाई अनेक प्रश्नहरूले घेरेका छन् । सबै प्रश्न अ,नुत्तरित छन् । तर, सुशीला छ वर्ष,देखि एउटै प्रश्न,को जवा फ खोज्दै हुनुहुन्छ “आमालाई मृ’त्यु,द’ण्डबाट कसरी बचाउने ?”
कसको दा,ह,संस्कार थियो त्यो ? सुशीलाले २०६८ सालमा साउदीबाट बाकसमा आएको आमाको श,व पशु’पति आर्यघाटमा दा’ह,संस्कार गर्नुभयो । लास आउँदा आमा साउदी गएको सात महिना मात्र भएको थियो । दाह’सं’स्कार गरेको ६ वर्षपछि सुशीलालाई का’जकि’रिया गरिसकेकी आमा साउदीमा जी ’वितै रहेको अ,र्को खबर आयो । खबर खुसीको थियो, तर अति अ’पत्या,रिलो । छ वर्ष बिते पनि बाकसमा आएको आमाको श’व आफ्नै हातले विमान स्थलबाट बुझेर पशुपतिमा दा’हसं’स्कार गरेको पीडा मनमा गाढै थिए ।
तर, उनै आमा साउदीको जेलमा जि’उँदै रहेको खबर सुन्दा मनमा हर्ष र पीडाका लहर एकसाथ दौडिए । उहाँलाई यो खबर दिउँसै देखेको सप,,ना सरह लाग्यो । तर, खबर दिने व्यक्ति सा’उदीमा रहेको नेपाली दूतावासका कर्मचारी थिए । उनले आफ्नो परि,चय दिएर आमा सरस्वती घिमिरे साउ दीको जेलमा थु,निएको खबर सुनाएका थिए ।
यो खबर सुनेपछि सुशीलाका मनमा फेरि प्रश्न बर्सिन थाले । त्यसो भए आफ्नै आमाको नाम र फोटो सहितको पास’पोर्ट, मृ’त्यु दर्ताको प्रमाण पत्र र मृ’त्युको कार,ण खुलाएर बन्द बाकसमा साउदीबाट आएको लास कसको थियो ?
आफ्नी आमाको नाममा मैले कसलाई दा,गबत्ती दिएँ ? पशु पतिमा कसको दाह’सं’स्कार गरियो ? कसको बर,खी बारियो ? यस्ता प्रश्नले घेरिन थालेपछि आमा जिउँदै भएको खबरले फुरुङ भएको सुशीलाको मन एक्कासि ख’ङ्ग्रङ्ग भयो ।
मनमाथि भुक्तमान सहन नसकेपछि जन्डिसको कारण पहिलो श्रीमानको ज्या’न गएपछि सर स्वती तीन सन्तान लिएर पर्वत बाट नवलपरा सीको सुनवल झर्नुभएको थियो । सुशीलालाई आफूहरू पर्वतबाट मधेस झर्दाको मिति त याद छैन ।
तर सानैमा बुवा गुमाउँदा भोगेका स’ङ्घर्षका दिनहरू अहिले पनि ताजै छन् सुशीलाको मन मस्तिष्कमा ।जेठी छोरी सुशीला र उहाँको भाइ सुनिललाई रुपन्देहीको खैरेनीमा रहेको माइती घरमा छाड्नुभयो सरस्वतीले ।
अनि कान्छी छोरी काखी च्या,पेर सरस्वती होटेल व्यवसाय गर्ने भन्दै सुनवल आउनुभयो ।सुनवल मा होटेल व्यवसाय गर्दागर्दै सरस्वतीले घिमिरे जातका केटासँग बिहे गर्नुभयो । तर बिहे गरेको केही वर्षपछि दोस्रो श्रीमान् ए,काएक स,म्पर्क वि,हीन भए ।
यो २०६८ सालको कुरा हो । दोस्रो श्रीमान् गुमाउनुको पीडाले सुशीलाकी आमा सरस्वती विक्षिप्त हुनुभयो ।‘बुवा हरा,एपछि आमालाई निकै गा’ह्रो भयो, सबै मिलेर खोजी पनि गरेका हौँ, तर मानिस भेटिएन । केही समयपछि एउटा लास भेटियो, तर बुवाको हो कि हैन चि,न्न सक्ने अवस्था थिएन’ सुशीला भन्नुहुन्छ ‘त्यो बेला आमालाई बुवा गुमाउनुको पीडा सहन गा’ह्रो भयो ।
२०७८ पुष १६, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 153 Views